Leicester City Oo Racfaan Ka Qaadatay Casaankii Jamie Vardy
HomeWararka MaantaLeicester City Oo Racfaan Ka Qaadatay Casaankii Jamie Vardy
Kooxda Leicester City ayaa racfaan ka qaadatay kaadhkii casaanka ahaa ee la siiyey weeraryahankeeda Jamie Vardy Ciyaartii Sabtidii ay barbar dhaca 2-2 da ah la galeen Naadiga Stoke City.
Vardy ayaa garoonka lagaga saaray daqiiqadii 28 aad xanaaqad uu ku sameeyey ciyaaryahan Mame Diouf.
Haddii go’aanka laga noqon waayo, 29 jirka xulka Ingiriisku wuxuu mutaysan doonaa saddex ciyaarood oo ganaax ah, waxaanu seegi doonaa kulamada kooxdiisu ku wajahi doonto kooxaha, Everton, West Ham iyo Middlesbrough.
Naadiga difaacanaya horyaalnimadu, waxay sheegeen inay jawaab fiican ka rajaynayaan, waxa ka soo baxa dacwadan, maalmaha soo socda.
Vardy ayaa laba lugoodis ugu booday laacibka reer Senegal ee Diouf, in kastoo uu kubbada taabtayna, haddana, wuxuu sidoo kale, cagaha uga qaaday weeraryahan Mame Diouf.
Garsoore, Craig Pawson oo kulanka dhex dhexaadinayayna, wuxuu qaatay go’aanka ah casaan toos ah inuu ciyaaryahanka garoonka kaga saaro, Waxaanu noqonayaa casaankani, kii labaad ee uu Vardy qaato sanadkan 2016 ka.
“Wuxuu doonayay inuu kubbada cidhiidhsado oo hello, laakiin uma socon inuu xanaaqad sameeyo,” Tabobaraha kooxda lagu naanayso Dacawooyinka ee Claudio Ranieri ayaa sidaas yidhi, waraysi uu bixiyey kadib ciyaartan kooxdiisa 2-0 lagaga horeeyey ay iska soo baday ee ay barbar dhaca gashay.
“Waxaa si adag isu cidhiidhinayay oo is baacsanayay Johnson iyo Vardy. Markuu istuurayna kubbada wuu taabtay. Waxay ila tahay in uu xaq u lahaa kaadhka digniinta ah.”